KOLIKOLY SY NY KORONTANA : Nampanao atrik’asa ho an’ireo mpitarika antoko politika ny Pnud
Tahaka ireo firenena maro aty Afrika dia anisan’ireo firenena tsy ho afa-bela amin’ny mety hisian’ny korontana ao aorian’ny fifidianana ihany koa i Madagasikara. 8 décembre 2017
Araka ny tombana nataon’ny ratsan’ny firenena mikambana misahana ny fampandrosoana na ny Pnud dia ahiana ny hisian’ny korontana eto amintsika amin’ny fotoana rehetra fa indrindra indrindra amin’izao raharaha mafana ikarakarana ny fifidianana izao.
Manoloana izany indrindra dia manatanteraka atrik’asa mandritra ny roa andro mifanesy ny Pnud, izay nanomboka ny alarobia lasa teo ka nifarana omaly. Atrik’asa izay nampandraisana anjara an’ireo mpikambana sy mpitarika antoko politika misy eto Madagasikara. Niadian-kevitra nandritra an’io roa andro io ny ady atao amin’ny kolikoly sy ny mahakasika ny fitsipi-pitondran-tenan’ireo mpanao politika.
Mpitarika amina antoko politika miisa 71 no nifanakalo hevitra tamin’izany, tanjona ny hisian’ny fifanatonana eo amin’ny samy mpanao politika mba hialana amin’ny mety hisian’ny korontana eto amintsika aorian’ny fivoahan’ny voka-pifidianana amin’ny taona 2018. Nodinihana sy notsindriana mafy nandritra ity atrik’asa nokarakarain’ny rantsan’ny Firenena mikambana misahana ny fampandrosoana ity ny mahakasika ny fampiharana ny fitondran-tena mendrika ho an’ireo mpanao politika.
Taorian’ny adihevitra tamin’ny andro voalohany dia nitondra ny fanehoan-keviny avy hatrany ny teo anivon’ny antoko Undd, izay nilaza fa zava-poana ny atrik’asa tahaka izao rehefa tsy ny mpanao politika mihitsy no manam-piniavana ny hiova, anisany nokianiny mafy tamin’izany ny fivadibadihana palitao ataon’ireo mpanao politika sasany.
Ho an’ny antoko Monima kosa indray dia nambaran’izy ireo fa tsy mahagaga raha toa ka mbola tsy milamina mihitsy ny toe-draharaha politika misy eto an-toerana satria misy amin’ireo mpanao politika no tsy manam-piniavana ny hampandroso an’i Madagasikara akory fa entin’ny fitiavan-tena ka tsy mifampatoky intsony ny rehetra. “Hiarahantsika mahalala fa i Madagasikara dia ao anatin’ny firenena faran’izay mahantra indrindra. Amiko izany dia miteny ho azy satria isika firenena manan-karena tokony ho ampy hivelomantsika ny harena eto”, hoy ny filohan’ny antoko Monima, Monja Roindefo. Araka io fanehoan-kevitra noentiny io dia tsy fahaiza-manao eo amin’ireo mpanao politika sy ny mpitondra no tena mahatonga ny firenena latsaka an-katerena tahaka izao. Fanehoan-kevitra noentin’ny antoko Undd hatrany ny hoe mila ireo mpanao politika mihitsy no manana izay finiavana ny hiova izay ka ho tratra ny tanjona rehetra amin’ny tsy hisian’ny korontana eto amin’ny firenena.